Wararka - Adeegyada habaynta nigisyada caalamiga ah ： kuu qaabee cabbirka saxda ah
Waxay ku saabsan tahay helitaanka waxaad rabto. Ku habboonaanta habboon. Dharka saxda ah. Faahfaahinta saxda ah. Habka saxda ah. La -taliyayaasheena muuqaalka shaqsiyeed, sidoo kale waxay u yaqaanaan dhar -xidhayaal, waxay kaa caawiyaan inaad ka doorato in ka badan 2000 dhar oo caado ah. Waxaan kaa caawin karnaa dhammaan shuruudahaaga.
Dharka hoosta haweenka, waxaan siinnaa naqshad, adeegyo wax -soo -saar, cabbirka nigis, naqshad adag iyo wax -soo -saar; Si adag u xakamee tayada dharka hoosta, si aad u bixiso adeegyo habaynta nigiska oo taxaddar leh. Roobka Xinzi wuu fahmayaa sida aad u mashquulsan tahay. Hadday tahay xafiiskaaga ama gurigaaga, waxaan u eegnaa baahiyahaaga jadwalkaaga. Waqtigu waa raaxada ugu dambaysa - taasina waa waxa aan ku siinno.
Xinzi Rain Apparel co., LTD., Oo la aasaasay 2004, ayaa la siiyay "Top Ten Brand", "International Sales Top Ten Trusted Brand" title, iwm. Aasaasaha aasaasiga ah qaab macquul ah oo horay loo sii qorsheeyay oo ku saleysan qorsheynta shirkadda, wuxuu sameeyay boqolaal dukaanno summad leh, dukaamo iyo laamo iyo wakaalado, kuwaas oo daboolaya ku dhawaad ​​30 gobol iyo degmooyin gudaha ah. Inta badan ku lug leh Bra & Kooban Kooban, Dahaarka, Dharka Ciyaaraha iyo Dheeraadka Bra & Panties.
Warshadeenu waxay dabooshaa aag 8000 mitir murabac ah, in ka badan 20 khadadka wax soo saarka, waxayna qotomiyeen laamaha Guangdong, waxay dejisay Horumarinta, Naqshadaynta, Waxsoosaarka, Iibka sida mid ka mid ah shirkadda kooxda. Isticmaalka saxda ah ee suufka, xariirta iyo satinka iyo qalabka kale ee maqaarka u fiican ee dunmiiqa astaanta ah, u oggolow diirimaadka hal-abuurka, wadnaha cirbad iyo dun in la is-yaqaanno.
Dharka iyo shaati-gacmeedyadayagu waa armaajooyinka iyo la-taliyayaasha sawirka, si fiicanna u yaqaan dharka, qaabka iyo qaababka. Waxaan u qorshaynaa, isku dubaridnaa, oo u haynaa macmiilkaaga, markaa si fiican bay ugu labisan yihiin xaalad kasta.
Si aad ugala tashato Adeegga caadada ah: OEM/ODM, adeegga naqshadeynta, sambal samaynta, MOQ, wax soo saarka badan, waqtiga dhalmada, waqtiga dhoofinta, dammaanadda bixintaada, warshaddeena, dadkeenna, alaabadayada iwm, pls waxaad xor u tahay inaad noo soo dirto E -mail, ka tag farriintaada, ku dar lambarka whatsapp, ama na soo wac, aad baad u soo dhaweynaysaa!